Sarany vola avy amin'ny manerantany. Ny kitapo manokana miaraka amin'ny taham-panafahana, tahirin-tsarimihetsika, sarintany sy sarobidy amin'ny orinasa manerantany.
AAPL = 161.14
Fiovan'ny fifanakalozana hatramin'izao
Apple Inc. tantara momba ny vidin'ny stock
Apple Inc. cap cap
2 632 123 416 576
-302 817 476 608 (-10.32%)
ny fanovana ny kapitalisma hatramin'izao
GOOG = 2 587.11
Alphabet Inc. tantara momba ny vidin'ny stock
Alphabet Inc. cap cap
1 717 181 480 960
-222 692 507 648 (-11.48%)
MSFT = 299.84
2 247 861 469 184
-324 063 199 232 (-12.60%)
AMZN = 2 816.88
1 428 575 354 880
-290 424 356 864 (-16.89%)
FB = 296.98
Facebook, Inc. tantara momba ny vidin'ny stock
Facebook, Inc. cap cap
826 127 089 664
-131 799 711 744 (-13.76%)
Tatitra ara-tantara momba ny sandan'ny orinasan'ny orinasa manerana izao tontolo izao.
Ny orinasa rehetra miaraka amin'ny kapitalisma sy volan'ny varotra eo amin'ny tsenambola ankehitriny.
Ny orinasa rehetra miaraka amin'ny latsaky ny dividendany sy ny fandoavam-bola.
Ny fahamendrehan'ny ampahany sy ny fiovan'ny isan-jato amin'ny vola miditra amin'ny ampahany amin'ny taona farany amin'ny orinasa rehetra manerantany.
Tatitra ara-bola momba ny tombony sy ny fahaverezan'ny orinasa manerantany.
Mamoròna ny portfolio'ny fampiasam-bola, arakaraka ireo fepetra heverinao ho manan-danja.
Allstockstoday.com no fitambaram-bola feno amin'ny tsenam-bola an-tserasera an'izao tontolo izao.
Nasehontsika amin'ny fotoana tena izy ireo indostria toy ny orinasa tsena:
Ny vidin'ny varotra manerana ny tany an-tserasera
Vidin'ny stock-time tena izy
Sarimihetsika vidin'ny tahiry eo amin'ny tsenambola
Famatsiambola ireo orinasa ankehitriny
Ny antsipirian'ny taratasin'ny orinasa nandritra ny vanim-potoana nitaterana farany
Tantaran'ny orinasa stock stock
Vokatry ny orinasa isaky ny fe-potoana eo amin'ny tsenan'ny stock
Rating momba ny orinasam-pifandraisana betsaka sy mahasoa indrindra
Aiza no mety hamatsy vola, calculator farany fidiram-bola an-tserasera
Ny serivisy tsirairay dia miasa maimaimpoana sy amin'ny tena fotoana.
Ny angon-drakitra rehetra dia raisina avy amin'ireo loharano misokatra ary nangonin'ny fandaharan'asa amin'ny serivisy an-tserasera mety.
Ny fiantohana an-tserasera amin'ny orinasa manerana an'izao tontolo izao no serivisy lehibe amin'ny tranokala. Maneho ny sandan'ny tahiry an'ny orinasa tsirairay izy io anio. Azonao atao ny mahita ny vidin'ny tahiry saika misy orinasa rehetra. Raha mandeha any amin'ny serivisy momba ny tahiry stock, tsindrio eto:
Ny vidin'ny stock-time
Ny sandan'ny saram-piarahan'ny orinasa amin'ny tena fotoana na ny saram-bolan'ny orinasa na ny saram-bolan'ny orinasa dia angonina avy amin'ny fifanakalozana ara-barotra tena misy eran'izao tontolo izao ary aseho amin'ny tranokalanay.
Miova isan'andro ny vidin'ny tahiry eo amin'ny orinasa, ary mahita ny vidin'ny tahiry amin'izao fotoana izao amin'ny allstockstoday.com
Tabilao vidin'ny tsenan'ny orinasa
Tabilao vidin'ny tsenan'ny orinasa iray - fanehoana an-tsary amin'ny vidin'ny tahiry ny orinasa iray ankehitriny ary ny tantaran'ny vidin'ny tahiry an-tsena amin'ny vidin'ny tahiry an-tserasera ho an'ny orinasa rehetra eto amin'izao tontolo izao hitanao amin'ny serivisy:
Fivondronan'ny orinasa ankehitriny - ny sandan'ny lanjan'ny orinasa ankehitriny.
Ny renivohitra ny orinasa dia miova isan'andro, tahaka ny lanjan'ny anjara aminy. Ny renivohitry ny orinasam-pifandraisan'ny orinasa dia voakasiky ny isan'ny anjara ao amin'ity orinasa ity koa, izay mety hiova amin'ny fotoana rehetra.
Ny serivisy atolotra an-tserasera dia mampiseho ny fitambaran'ny orinasa tsirairay eto amin'izao tontolo izao. Raha hampiasa izany dia tsindrio ilay rohy:
Ny Dividiana amin'ny fizarana orinasan'ny orinasa nandritra ny vanim-potoana tatitra farany dia iray amin'ireo toetra manan-danja izay misy fiantraikany amin'ny tombom-barotra amin'ny fizarana iray, ny haben'ny vola azo avy amin'ny fametrahana vola amin'ny mpampiasa vola ao anatin'ity fizarana ity.
Ny antsasaky ny fangatahana dia fampahalalana am-pahibemaso ary isaky ny vanim-potoana fitaterana dia noforonina ho an'ny orinasa tsirairay.
Azonao jerena ny habetsaky ny fizarazarana isaky ny orinasa amin'ny vanim-potoana nitaterana farany, ary koa ho an'ireo vanim-potoana fitaterana hafa ao amin'ny faritra misy anay, izay antsoina hoe:
Tantara momba ny tahiry stock
Ny tantaran'ny orinasa momba ny stock stock amin'ny fotoana samihafa dia misy amin'ny serivisy ao amin'ny serivisintsika. Ka afaka mahita maimaimpoana ianao:
tantaran'ny tahiry stock ho an'ny orinasa isan'andro
tantaran'ny vidin'ny tahiry isan-kerinandro
ny tantaran'ny vidin'ny tahiry isam-bolana
tantaran'ny orinasa stock stock mandritra ny taona
Raha hijery ny tantaran'ny vidin'ny tahiry ao amin'ny orinasa tsirairay, ampiasao ny rohy:
Vokatry ny orinasa ankehitriny - ny lanjan'ny tombom-barotra ofisialy tombony amin'ny fanambarana farany momba ny orinasa. Ao amin'ny tranokalanay dia tsy vitan'ny hoe mahita ny sandan'ny tombotsoan'ny orinasa ihany ianao ankehitriny fa mahita ny tomban'ny orinasa ihany koa mandritra ny vanim-potoana mitaterana.
Ny tombotsoan'ny orinasa dia toetra iray izay misy fiantraikany lehibe amin'ny alàlan'ny fizarana sy ny lanjan'ny tahiry ho an'ny rahampitso.
Ny serivisy "orinasa tombony" dia azo alaina ao amin'ny:
Ny fidiram-bolan'ny orinasa isaky ny vanim-potoana eo amin'ny tsenan'ny stock
Ny vola miditra amin'ny tsenan'ny tahiry mandritra ny vanim-potoana tsirairay dia fampahalalana lehibe ho an'ny vidin'ny tahiry. Ny lanjan'ny ampaham-bola na ny vidiny dia mamaritra ny fidiram-bolan'ny orinasa amin'ny vanim-potoana hitaterana samihafa.
Eo ambanin'ny fidiram-bolan'ny fandavahana ankehitriny dia mahazo ny fidiram-bolan'ny orinasa nandritra ny fotoana nitaterana farany.
Eto ianao dia afaka mahita ny vola miditra amin'ny orinasa toy ny ankehitriny, ary koa ny tantaran'ny vola miditra amin'ny orinasa araka ny tatitra teo aloha.
Ny serivisy "Company Revenue" dia hita eto:
Ny laharan'ny orinasa tombony sy mahasoa indrindra dia angonina avy hatrany mifototra amin'ny teny nindramina avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao.
Ny laharan'ny tahiry an-tserasera dia iray amin'ireo serivisy ilaina indrindra ho an'ny mpampiasa vola manerana izao tontolo izao. Miova isan'andro ny lisitry ny orinasa mahasoa. Tsy tsiambaratelo fa ny famatsiam-bola mahasoa indrindra dia atao tsara amin'ireo orinasa manatsara indrindra.
Azonao atao ny mahita maimaimpoana ny isa ny orinasa mahasoa indrindra manerantany amin'ny serivisinay:
Aiza no mety hamatsy vola, calculator farany fidiram-bola amin'ny Internet
Aiza no hamatsiana vola, ny kajy avo lenta amin'ny fidiram-bola an-tserasera dia serivisy mahaleo tena tsy miankina amin'ny tranokalanay. Azonao atao ny misafidy karazan'orinasa samy hafa mba hahafantaranao hoe aiza ny mampiasa vola:
fiovana amin'ny vidin'ny tahiry ny orinasa
mizara: fatrany sy ny fandoavam-bola
tondro ara-bola toy ny tombony, tombony, isan'ny fananana
Manapa-kevitra ianao hoe aiza ny vola hividianana ny vola, fa ny serivisy dia hanampy anao hisafidy vitsivitsy ny orinasa mahasoa indrindra amin'ny fampiasam-bola avy amina an'arivony.